Fotsy hoditra misy akanjo fohy
Ny fotsy hoditra vehivavy amin'ny rantsana fohy - vahaolana manerantany ho an'ny vehivavy tsara tarehy amin'ny taona samy hafa. Rehefa nomena ny fitaovana nanamboarana an'io akanjo io, ary inona no singanina voaravaka azy, dia azo atao ao amin'ny birao ny akanjo toy izany, ho an'ny mandeha na antoko.
Endriky ny fotsy hoditra mamy miaraka amin'ny akanjo fohy
Ny akanjon'antoka mavo miaraka amin'ny akanjo fohy dia afaka manana karazana karazana maro samihafa. Mba hahafahana mijery tsara sy mahaleo, dia ampy ny safidy iray amin'ny safidy tahaka izao:
Ny akanjo fotsy fotsy mitovitovy amin'ny akanjo fohy sy ny fihodinam-bokatra dia tonga lafatra ho an'ny birao. Mandritra izany fotoana izany, tsy ny môdely rehetra mitovy amin'ny blouses ihany no afaka mandray anjara amin'ny famoronana sary. Ny Stylistes dia manoro hevitra ny mitafy afa-tsy ireo lobaka izay vita avy amin'ny sehatra voajanahary, kavina na chiffon - tsy manome ny volavolan-damba vavy loatra izy ireo ary mamela ny hoditry ny hoditra, izay tena zava-dehibe amin'ny fahavaratra amin'ny taona;
Ny natiora romantika sy malefaka dia mitafy akanjo fotsy ary misy "tselatra" kely. Mijery tsara miaraka amin'ny kiraro mainty na skirt iray. Mandritra izany fotoana izany dia tokony hohadinoina fa ny felana toy izany dia afaka mampivelatra ny soroka, noho izany dia tokony hifidy modely hafa ny zazavavy miaraka amin'ny "triangle triangle";
Ny blazsy fotsy manana akanjo fohy toy ny "winglet" na "petal" dia manantitrantitra ny hakanton'ilay ankizivavy sy ny soroka. Ity modely ity dia mety tsara amin'ny fisehoan-javatra manetriketrika, fa raha tsy misy afa-tsy sata na chiffon. Ny akanjom-boninahitra vita amin'ny lambam-pandriana iray misy rantsana mitovy amin'izany no tsara indrindra ho an'ny fivoriana fandraharahana;
Ny akanjo fotsy fotsy manana akanjo fohy sy baskety dia modely samihafa izay mety ho entin'ny tompon'ireo endrika isan-karazany. Ity akanjo ity dia afaka manamboatra lava-pandrika be loatra na kibon'ny olana, ary koa manantitrantitra ny hatsaran'ny faritra dekollete;
Ireo zazavavy izay te-hitsangana amin'ny vahoaka, dia tsy maintsy ho toy ny bloubli miaraka amin'ny fatorana asymmetrika. Azo jerena ao amin'ireo fanangonam-bokatra malaza indrindra eran-tany izay te hampiseho modely tsy mahazatra ho an'ny vahoaka amin'ny ankapobeny;
Modely iray mahaliana hafa izay tena malaza eo amin'ny vehivavy sy ny vehivavy dia fotsy hoditra mamirapiratra miaraka amin'ny akanjo fohy, voaravaka amin'ny tsipìka. Manome toky ny tompony fa miavaka sy manintona izy ary mamela azy haneho tsirony tsaroana.
Na dia samy hafa tanteraka aza ny ankamaroan'ny blozy mavomavo amin'ny lohataona, dia manintona ny vehivavy tsara tarehy foana ireo vokatra ireo ary mahatonga azy tsy hijanona fotsiny. Fidio izay safidy tianao indrindra, ary ataovy azo antoka fa hampidirinao ao amin'ny trano fialan-tsasatrao.
Thermo bodibedy Thermoform
Ny fetin'ny ririnina Adidas
Kofehy avy amin'ny kofehy matevina
Vehivavy masira tsara tarehy
Ny kofehy amin'ny vehivavy miaraka amin'ny kiraro
Jiro pensily miaraka amin'ny tandroka manify - 44 sary avy amin'ny modely modely amin'ny fotoana rehetra
Fivarotana any Beijing
Vehivavy fotsy fotsy
Akanjo volom-boasary matevina amin'ny kapa
Skirt mit print floral
Kurt Cobain - ny antony nahafaty
Hevitra ho an'ny efitrano kely
Ahoana ny fametrahana banky?
Fanamboaran-damba ho an'ny vehivavy bevohoka
Arka any amin'ny lakozia
Skirt styles ho feno - modely modely sy modely
Fashionable trousers 2013
Fitsaboana miaraka amin'ny tongolo lay
Amboaram-peo amin'ny sofa
Mivezivezy foana ny ankizy
Jacket miaraka amin'ny Basque
Brad Pitt sy Selena Gomez
Mofomamy mofomamy tsy misy baka - sakafo mahavelona amin'ny tsindrin-tsakafo miaraka amin'ny fanampiana hafa
Ny fanaintainana amin'ny hozatry ny fo - ny antony
Mitoraka eo am-baravarana
Mofomamy mofomamy amin'ny ronono